Ahoana ny fomba hanakanana ny fifandraisana amin'ny Telegram ary hahafantatra raha nanakana anao | Vaovao IPhone
Nacho Aragonés | | Fampiharana iPhone
Lavitra ny fampiharana fandefasan-kafatra be mpampiasa na tambajotra sosialy mifantoka kokoa amin'ny horonan-tsary sy sary, Telegram dia mametraka ny tenany ho iray amin'ireo fampiharana hafa amin'ny fomba maoderina. Manomboka amin'ny vondron'olona an'arivony, hatramin'ny fampiasana azy ho rahona manokana tsy misy fetra sy maimaim-poana, mandalo, amin'ny fomba tsotra, resaka amin'ny namana azonao ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra ary tsy mila toerana malalaka, ohatra kely izy ireo amin'ny maro fomba fampiasana Telegram.
Fa ny fampiasana dia tonga ny andraikitra. Vao haingana izahay no nilaza taminareo rehetra momba ny hidy ao amin'ny WhatsApp Ary tonga izao ny fotoana hianarana ny momba ny hidy Telegram.
1 Ahoana no fomba hanakanako olona?
2 Inona no mitranga rehefa manakana olona iray aho?
3 Ahoana no ahafantarako fa voasakana aho?
4 Ahoana no hahalalana raha voafetra ny kaontinao ary inona no tokony hatao?
Ahoana no fomba hanakanako olona?
Mety misy olona tsy tianao hifandray aminao, manana. Mety ho olom-pantatra taloha ianao, izay nolavinao tamin'ny tambajotra hafa, na mety olon-tsy fantatra nanoratra taminao tamin'ny alalanao.
By ny lalana aliases na @Anaran'ny mpampiasa ampahibemaso ho an'ny rehetra izy ireo. Ary koa ny sary momba ny mombamomba anao sy ny anarana napetrakao (azonao atao ny mametraka izay tianao). Ka raha te-ho tsikaritra ianao dia tsara kokoa ny tsy manana aliasza ary mametraka sary mombamomba izay tsy miseho na, mivantana, tsy asiana.
Fa alao moramora ny nomeraon-telefaonanao dia zarain'ireto toe-javatra manaraka ireto ihany:
- Raha toa ka efa manana ny nomeraon-telefaonanao voatahiry ao amin'ny phonebook-ny izy ireo.
- Raha mizara ny nomeraonao ny tenanao (mampiasa ny "Share my number")
- Raha voatahiry ao anaty fandaharam-potoananao ny nomeraon-dry zareo ary mandefa hafatra aminy izy ireo na miantso azy ireo (toy ny hoe nahazo SMS na antso avy taminao izy ireo).
Tsy ho hitan'izy ireo ny tarehimarikao amin'ny toe-javatra hafa, toy ny hoe hita fa mampiasa fikarohana eran-tany ianao na amin'ny chat ataon'ny vondrona.
Amin'ireny tranga ireny izay nanatonana anay fa tsy tiantsika, Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia tsindrio ny "spam". Izy io dia hafatra izay miseho eo an-tampon'ny chat vaovao izay nosokafana niaraka tamin'io olona io. Manakana ny mpampiasa ity hetsika ity ary manaitra ny Telegram ihany koa. Raha misy mpampiasa hafa koa milaza izany fifandraisana izany ho toy ny spam, dia ho voafetra mandritra ny fotoana fohy na mandritra ny fotoana tsy voafetra ny kaontinao.
Raha te-hanakana mpampiasa iray izay tsy nifandray taminay na efa nanao izany izahay nefa tsy nanome "spam" dia tsotra Tsy maintsy mandeha any amin'ny sehatry ny telegram> filaminana sy tsiambaratelo> "mpampiasa voasakana". Any izahay dia afaka manampy vaovao, na manitsy ireo izay efa voasakana. Azontsika atao koa ny manao azy amin'ny chat na amin'ny mombamomba ilay mpampiasa voalaza, izay azontsika alefa amin'ny alàlan'ny fanindriana ny sarin'ny mombamomba azy ireo. Ho hitantsika ny safidy "hanakana ny mpampiasa" amin'ny mena etsy ambany.
Azontsika atao koa ny mitatitra ireo fantsona sy vondrona ho toy ny spam. Na oviana na oviana, raha miditra amin'ny vondrona na fantsona isika, amin'ny fipihana ny anarana, dia hiseho ny menio ahafahantsika "manao tatitra". Raha vantany vao vita izany dia hanala antsika amin'ny vondrona na fantsona izy io, ka tsy ho azon'izy ireo ampiana intsony. Raha manenina ianao amin'ny fanindriana ny "report", dia tsy maintsy mandefa rohy fanasana aminao izy ireo ary hanaiky hiditra indray.
Ary mazava ho azy, azonao atao koa ny manakana bots.
Inona no mitranga rehefa manakana olona iray aho?
Rehefa manakana fifandraisana ianao dia izy ireo tsy ho afaka handefa hafatra aminao intsony (tsy misy resaka miafina), tsy misy antso. Tsy ho afaka hanampy anao amin'ny vondrona koa izy io. Inona koa, tsy ho hitan'izy ireo ny sarinao amin'ny mombamomba anao na ny toerana misy anao eo amin'ny Internet (hiseho foana ve ianao hoe "farany ela"?
Ahoana no ahafantarako fa voasakana aho?
Tsy misy fomba hahafantarana azo antoka, fa misy famantarana foana. Rehefa sakanana ianao dia tonga aminao izany ny hafatra alefanao dia tavela miaraka amina marika fotsiny. Tsy ho hitanao ny sarin'ny piraofilina (izay, raha hitanao teo aloha, dia famantarana mazava tsara fa voasakana ianao) ary Tsy ho hainao koa ny hahafantatra ny fotoana ifandraisan'izy ireo farany. Eny, io zavatra io ihany no mitranga rehefa manakana olona iray ianao, fa hita avy any an-kafa.
Ahoana no hahalalana raha voafetra ny kaontinao ary inona no tokony hatao?
Azo atao ny manana hidin-trano amin'ny kaontinao ary tsy mahazo manoratra amin'ny olon-tsy fantatra ianao, mamorona sy manasa olona amin'ny fantsona sy vondrona, sns. Tena tsy fahita firy ny fametrahan-dry zareo fetrany amin'ny kaontinao amin'ny fampiasana mahazatra, fa raha mihoatra, ohatra, ny famoronana vondrona sy fampidirana olona ao amin'ny vondrona izahay raha tsy misy ny fanekeny, azo atao ny mametra ny kaonty Telegram.
Ny fetra dia mety mihelina, iray andro, iray herinandro, na mety ho tsy voafetra (mandrakizay). Na izany na tsy izany, tokony hifandray amin'ny bot ianao @ spambot (iray amin'ireo kaonty voamarina vitsivitsy ho hitanao amin'ny Telegram). Hotantarainy aminao ny zava-drehetra momba ny sakana nataonao ary afaka mitaraina ianao raha mieritreritra ianao fa tsy ara-drariny na nisy lesoka.
Ho an'ny karazana olana hafa, fisalasalana na fanontaniana mifandraika amin'ny Telegram, manana lisitr'ireo ianao fanontaniana matetika apetraka ary, raha tsy mahomby daholo ny hafa rehetra dia tadidio izany manana fanohananan'ny mpampiasa mahafinaritra. Avy amin'ny fikirakiran'ny fampiharana Telegram anao, kitiho ny "Mametraha fanontaniana" ary hamaly anao ireo mpilatsaka an-tsitrapo mpanohana Telegram.
Ampidino | Telegram X
Ampidino | telegrama
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ireo rehetra momba ireo sakana ao Telegram
Raha manafina ny nomeraon'ny findaiko amin'ny telegram aho, ary mandefa hafatra amin'ny olona amin'ny telegram, azoko atao ve ny manakana ahy raha tsy manana ny nomerao miafina aho?
Ny fivarotana iPhone "nohavaozina" dia miroborobo ary misy fiatraikany amin'ny terminal Android